Izindaba ezinhle kubashayeli bezimoto | News24
Izindaba ezinhle kubashayeli bezimoto
Uzokwehla uphethiloli kwezayo.
IZINDABA ezinhle kubashayeli bezimoto ngezokuthi bangalindela ukwehla kwamanani kaphethiloli ngenyanga ezayo, ngokusho kwe-Automobile Association (AA).
Esitatimendeni, i-AA ithe ukuqina kwamandla erandi nokwehla kwamanani kawoyela emhlabeni kusho ukuthi abashayeli bangase babone uphethiloli wehla ngo-60c kuya ku-64c ilitha ngokuqala kwenyanga ezayo. Amanani kadizili kulindeleke ehle ngo-60c ilitha bese kuthi awaphalafini wona ehle ngo-57c ilitha. “Irandi liqhubekile nokuqina uma liqhathaniswa nedola laseMelika ingxenye yonke yokuqala kaJuni, nokwenze ukuba amanani kawoyela ehle ngo-3c ilitha,” kusho i-AA.
“Umehluko omkhulu nokho wenziwe uwoyela, owehle cishe ngo-8% kusukela inyanga iqala,” ngokusho kwesitatimende.
Uthe amanani kaphethiloli angase aqhubeke nokwehla uma kungekho okuzaphazamisa umnotho noma ezombusazwe ngaphambi kwama-rating review alandelayo. Lokhu kulandela ukuthi wehlile uphethiloli nangasekuqaleni kwenyanga ephezulu.